”Waxaan rajaynayaa inaan la kala dirin sidii nagu dhacday!” – Eder oo weerar xun ku qaaday xaaladda dhaqaale ee Inter Milan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan rajaynayaa inaan la kala dirin sidii nagu dhacday!” – Eder oo...
”Waxaan rajaynayaa inaan la kala dirin sidii nagu dhacday!” – Eder oo weerar xun ku qaaday xaaladda dhaqaale ee Inter Milan
(Milano) 24 Maajo 2021 – Laacibka Eder oo horay Inter usoo maray ayaa markale weerar ku qaaday qoyska Zhang, gaar ahaan lacag amaah ah oo beri dhowayd soo gaartey kooxda Inter oo waloow ay Horyaalka hanatay aan ku jirin xaalad dhaqaale oo wanaagsan.
Kooxda Nerazzurri ayaa waxaa saamayn ku yeeshay go’aan kasoo baxay Dowladda Beijing oo xayirtay in lacago badan lagu maalgeliyo ciyaaraha dibedda, taasoo jug u gaysatey qorshihii Suning oo ah milkiilayaasha Inter, keentayna in lakala diro kooxdii Suning FC ee Shiinaha.
“Waxaan rajaynayaa in ay lacagi u iman doonto Suning FC. Waxaan rajaynayaa inaysan Inter ku dhicin sidii na qabsatay (maadaama ay milkiilayaashu isku mid yihiin).” ayuu yiri Eder.
Eder ayaa sheegay in markii ay kooxdoodu horyaalka Shiinaha hanatay bishii Diseembar ay misna wax kharash ah waayeen muddo 8 bilood ah, taasoo keentay in kooxda la kala diro iyadoo aan lacagtoodii iyo sharraxaadba la siinin.
“Yurub waa sahlan tahay in la doono in muuqaal wanaagsan la yeesho, balse xaaladdu ma sahlana“ . ayuu ku dooday Laacibkan Talyaani-Brazil-ka oo bishii Abriil sidoo kale weerar ku qaaday xaaladda dhaqaale.
Inter ayaa haatan lacag dhan 250 milyan oo euro kasoo amaahatay sanduuq la yiraahdo Oaktree, taasoo looga fadhiyo celinteeda iyadoo ay weliba ribo adagi saaran tahay.
Previous articleDood diblomaasiyadeed oo caalami ah oo ka taagan dayuurad si khiyaano ah loogu dejiyey Ruushka Cad kaddibna nin ”mucaarad ah” lagala degey
Next articleBBC oo iyadoo fadeexad kasoo kabanaysa mid kale dhex taagan & waxa lagu haysto